Manchester United Oo Qaadaysa Tillaabadii Ugu Horeysay Ee Ku Aadan Saxiixa Lautaro Martinez.
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo qaadaysa tillaabadii ugu horeysay ee ku aadan saxiixa Lautaro Martinez.
February 24, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qaaday talaabooyinkii ugu horeeyay ee ay kula soo saxiixanayso weeraryahankaInter Milan Lautaro Martinez inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Red Devils ayaa la filayaa inay u dhaqaaqdo weeraryahan cusub ka hor xilli ciyaareedka 2021-22, iyadoo Edinson Cavani uu beeca xorta ah kaga tagi doono , mustaqbalka Cristiano Ronaldona oo sidoo kale caddeyn.
Harry Kane ayaa maalmihii la soo dhaafay lala xiriirinayay kooxda heysata 20-ka jeer ee horyaalka Ingariiska, laakiin kabtanka England ayaa laga yaabaa inuu qiimo u yeesho inuu u wareego Old Trafford.
Sida laga soo xigtay Il Giorno , Man United ayaa haatan diiradda saaraysa Martinez, iyadoo kooxdu ay doonayso inay xiddiga reer Argentina keento Premier League xagaagan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Red Devils ay ‘qaadatay tallaabadii ugu horreysay’ ee ku aaddan saxiixa 24-sano jirkaan, laakiin Liverpool iyo Arsenal ayaa sidoo kale la sheegay inay doonayaan adeegiisa.
Martinez ayaa dhaliyay 12 gool waxaana loo diwangeliyay labo caawin 33 kulan oo uu u saftay Inter xilli ciyaareedkan, laakiin wax gool ah uma dhalin kooxda heysata horyaalka Serie A tan iyo 17kii December.
Nerazzurri ayaa la rumeysan inay Qiimeeneyso South America, kaasoo qandaraas ku jooga San Siro ilaa June 2026, oo ku kacaya €90m (£75m).